Taona vaovao : toe-tsaina vaovao – Blaogin'i Voniary
Araraoty izao taona vao miantomboka izao andraisanao fanapahan-kevitra tsara. Raiso an-tànana ny fiainanao fa aza miankin-doha amin’ny hafa. Mandraisa lesona avy amin’ireo zava-nitranga teo aloha, sahia mametraka tanjona, manàna fijery miabo ary indrindra apetraho amin’Andriamanitra hatrany ny fiainana dia ho mpandresy lalandava ianao.
Manaova jery todika ny taona lasa. Inona ny vita ? Inona no tsy vita ? Inona no nety ? Inona no tsy nety ? Avy amin’ireo no tsara andraisana lesona mba ahitana izay fahazarana na fihetsika tsy tokony haverina intsony. Avy amin’io tomban’ezaka io koa no ahitana izay làlana tsara tohizana. Azonao atao koa ny maka izay tsara avy amin’ny manodidina, ny boky ary izay rehetra mety hanovozam-pahalalana.
Toy ny olo-manjeny fotsiny ianao raha tsy manana zava-kendrena eo amin’ny fiainana. Asa raha tadidinao ny lesona azo tsoahina tao amin’ilay lahatsoratra : « Ilay tondro avaratra hafa kely », izay milaza toy izao raha fintinina: raha tsy misy tanjona mazava ianao dia zary olon-koazy, tsy mahita izay aleha ary tsy tonga n’aiza n’aiza. Koa farito izay tanjona tianao hotratrarina mandritra ity taona ity ary ampiaraho amin’ny ezaka izany.
Manana fijery miabo
Fantaro fa misy mahasoa anao hatrany izay tranga lalovanao na izay eritreretinao ho ratsy indrindra aza. Mahaiza mianoka sy mankafy ireo fotoana mahafinaritra. Hoy indrindra izay Dadabenay izay : « Ankamamio ny fotoana rehetra fa aza atao haingana fa maika. » Raha sendra sedra dia mitafia fikirizana sy faharetana. Mitrakà raha tojo ny mafy. Tsarovy fa hery ho anao voalohany indrindra avy eo ho an’ny manodidina anao ny tsiky kely iray.
Izany rehetra izany dia tsinontsinona avokoa raha amin’ny herin’ny tenanao manokana. Misy fetra ihany manko ny herinao fa manaike ho fenon’ilay mpahary anao. Ankino amin’Izy Tompo hatrany ny fiainanao fa izy no mandahatra ny zavatra rehetra. Tsarovy fa : « Ny zavatra rehetra dia entin’Andriamanitra hahasoa izay tia azy » Rom 8, 28a. Ary « Ankino amin’ny Tompo ny anjaranao, dia matokia, azy, fa dia hanao izy » Sal 37, 5.
Hamaranako azy ity tenin’i Marylin Ferguson ity : « Tsy misy olona afaka manery olona iray hiova. Ny tsirairay dia samy manana varavaran’ny fiovana izay tsy azo sokafana raha tsy avy any anatiny ». Miankina amin’ny toe-tsainao voalohany indrindra ny mahatsara ny fiainanao. Io ilay toe-tsaina mpandresy.
fahombiazana, fiainako, fijery miabo, mpandresy ianao, tanjona mazava, toe-tsaina mpandresy